रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर) | नेपाली पब्लिक रोपाइँ नसकेसम्म ‘असार’ (फोटोफिचर) | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, ३० असार सोमबार १३:२५
विराटनगर – डम्म कुहिरो, छिनछिनको झरीबादल। भ्यागुताको एकोहोरो ट्वार–ट्वार अनि झ्याउँकिरीको विरह। सबै खेतीपातीमा लागेपछि सुनसान बस्तीहरु। कामको चापले हिउँदमा जस्तो न भेटघाटको मौका, न बोलचालको फुर्सद। यस्तो बेला मायापिरतीमा डुबेकाहरुको मन नविरक्तिउन् पनि कसरी?
‘असारे महिनामा पानी पर्‍यो रुझाउने, एक्लो यो मनलाई कसरी बुझाउने? भन्थिन् है मैच्याङले रुँदै बरर…’
गायक छुजन डुक्पाले गाएको यो गीतमा पानी परेपछि ‘मैच्याङ’ को मन विरक्तिएको छ। तर जिन्दगी मायापिरतीले मात्रै चल्दैन। ‘माना खाएर मुरी उब्जाउने’ बेला हो असार महिना। जब झरी पर्छ, किसानको मन भने बिछट्टै रमाउँछ। उनै भ्यागुता र झ्याउँकिरीको लयमा किसानहरु खेतका गह्रा–गह्रामा पसिना बगाउँछन्। यतिबेला सबैतिर रोपाइँले भ्याइनभ्याइ छ।
जेठको अन्त्यदेखि साउनभर धान रोपाइँ हुने भएकाले किसानी भाषामा पुरै यस अवधि ‘असार’ हो। बिहानदेखि साँझसम्म हिलोमा चोपलिँदा जतिसुकै लखतरान भए पनि रोपाहार र बाउँसेहरु असारे भाकासँगै थकाई बिर्साउँछन्। खेती लगाउन आकाशे पानीको भर पर्नु किसानहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यस क्षेत्रप्रति आकर्षण घट्दो छ।